Uyisebenzisa njani ifonti ekufuneka ifundwe | Izidalwa ezikwi-Intanethi
Ukubhala kuvela kwindawo yokujonga ukhuphiswano rhoqo ngaphakathi kwihlabathi lababhali abanqwenela ukuba nenani elikhulu labafundi kwaye kunjalo ngababhali engenakwenzeka ukutsala abafundi ngayo nayiphi na indleko. Ke kuyadinisa ukuba ababhali benze fumana abafundi abalungileyo ngaphakathi kwebhlog.
El Umxholo wenqaku Ngokuqinisekileyo ngowona mzimba ubaluleke kakhulu, nangona kunjalo, umxholo olungileyo awusosiqinisekiso sokuhamba rhoqo kwabafundi kwibhlog yakho kwaye ngaloo ndlela, kufuneka sazi zithini izinto ezinokutsala abafundi ngakumbi kumanqaku ethu.
1 Uhlobo lochwethezo lokutsala abathengi
2 Yintoni typography?
Uhlobo lochwethezo lokutsala abathengi
Ngoku kukho isahlulo esikhulu se ababhali okanye abayili ezingathatheli ngqalelo izinto ezahlukeneyo ukuba ekugqibeleni babe nefuthe ngakumbi kubuninzi babafundi kwiibhloko zabo, bejonga ngempazamo imiba efana nomxholo, mhlawumbi amanqaku athile abonisa oko kwisicatshulwa okanye amagama ngokwawo. Oku kuyenza kuphela Umbhali okanye umyili uyilibale izinto ezibaluleke ngokwenene ukuphumelela ukufunda ngaphakathi kwesakhelo sokufunda ibhlog.
Ke, eli nqaku liza kuveza izinto ezithile ekufuneka ziqwalaselwe, zibonisa eli xesha njenge eyona nto ichaphazelayo, ebumba ifomathi kunye nohlobo lweeleta esizisebenzisa kumanqaku ethu.
Uhlobo lokuchwetheza unokwenza umahluko phakathi kokufundwa hayi. Kwaye, kunokubonakala ngathi kugqithisile, kodwa kuyafuneka ukwazi ukuba ungawazi njani onke amathuba abafundi bethu. Umbhali okanye umyili wegraphic Kuya kufuneka uzifake kwizicathulo zabafundi abaninzi, ukuze wazi ukuba yeyiphi eya kuba yimfuneko yokuba umfundi ayiveze emva kokufunda amanqaku akhoyo. Yiyo loo nto umbhali kufuneka ayithathele indawo indima yomfundi, eqonda ukuba inqaku alifundayo litsha kuye.
Ukuchwetheza kunokuba yinto entle kakhulu enkosi ithuba elikhulu lokuba kufuneka siyenze ngokwezifiso zethu kunye nesimbo sethu. Nangona kunjalo, xa sizama ukuphembelela inyambalala yabantu, ukuthanda kwethu kuhlala kuziphosa ecaleni, kusizisa ezona ntlobo ziqhelekileyo zoluntu, sizama phuhlisa iprofayili yomzekelo ngokweenketho ezidityanelweyo, ezimelwe kangangoko, ukuze zibekho yanelisa abaphulaphuli abaninzi, kule meko, kubafundi.
Kodwa typography inokuba yingozi kwimisebenzi yethu, kuba kufuneka sikuqwalasele oko kubafundi, umgangatho womsebenzi wethu unomda omfutshane kakhulu wesiphene kuboKe ngoko, ezona zinto zincinci zokwakha okanye ezibonakalayo ziya kwanela ukuvala iphepha kwaye ukhethe omnye umbhali kuloo ndawo ukuze agqibe. Ngokuchasene noko, kubaluleke kakhulu ukuba umfundi amkele typography entle entle, kodwa ubuqili, ukungqinelana, kodwa kungabi ngqongqo kangako, yindawo esembindini phakathi komtsalane, onomtsalane ekuhlaleni nakwingcali.
Umbhali okanye umyili kufuneka athathele ingqalelo ubungakanani befonti yakhoEwe, njengabaqulunqi, kufuneka sicinge kwinto yokuba umfundi engazi malunga nokusondeza umsebenzi kwikhompyuter yakhe. Kuyimfuneko ukwazisa umfundi ngenqaku ngazo zonke izinto ezinokupheliswa kwimpazamo ebonakalayo, ukumnika intuthuzelo kunye nokuziqhelanisa ngokulula ngokunxulumene nokufunda konke.
Ke, ngumcimbi wokuthathelwa ingqalelo imiba ebonwayo neyolwakhiwo, ekufuneka siyenzile ngaphandle kokupapasha inqaku, kuba umxholo, nokuba ulunge kangakanani, awuyi kusiqinisekisa ngenani elilungileyo labafundi kwibhlog yethu.
Typography, kunye nabanye izinto ezibonakalayo baya kuba ngumahluko omkhulu phakathi kwenani elilungileyo lotyelelo kunye noluhlu olunobungozi lotyelelo. Kubaluleke kakhulu ukuba umbhali okanye umyili unomdla wokufumana uluntu oluhle ngokubhekisele ukuba zithathela ingqalelo kangaphi iinkcukacha ezichazwe apha. Ngaba uyafuna ukutyelelwa? Cinga uhlobo lwakho lochwethezo, uluguqule, kwaye uhlale phantsi ulinde iziphumo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » Izibonelelo » Uyisebenzisa njani ifonti ekufuneka ifundwe
Lungisa ukungafezeki kolusu nge-Photoshop